Daraasad: Socod gaabida waxay keentaa gabow degdeg ah |
Daraasad: Socod gaabida waxay keentaa gabow degdeg ah
Socod gaabida ma keenta oo keli ah jirka qofka oo gaboobo balse waxaa kale oo ay keentaa ayey yirahdeen kuhubarada daraasadda sameysay qofka oo wajiga duq uga ekaado iyo maskxadiisa oo yaraato.
Kooxda khubarada caalamiga ah ee daraasaddan sameysay waxay sheegeen natiijada daraasadda ka soo baxday iney ku noqotay “mid layaab iyo fajac leh”.
Dhakhaatiirta qaybta ka ahayd daraasaddan waxay baaritaan ku sameeyeen caafimaadka qofka iyo socdka waxa ka dhaxeyn kara. gaar ahaanna Socodka qofka wixi ka sarreeya 65 ilbiriqsi xawaaraha uu ku socdo, maadaamaa ay tilmaan u yihiin adadkaanta murqaha qofka, sanbabka iyo sida uu u shaqeeyo, adadkaanta dhabarka iyo aragga indhaha.
Socod gaabnida qofka marka uu da’da noqdana waxay saaynisyahannadu sheegeen in laga dhaxlo waxyeella maskaxeed iyo gabow.
Guud ahaan waxay daraasaddu sheegtay socod gaabida iney astaan u tahay qofka “gabowga sida uu ugu soo degdegayo” gaar ahaan xubnaha ay ka midka yihiin sanbabka, ilkaha, habka difaaca cudurrada, iwm uu ka dhaxlo, halka dadka socodkooda u xawaaraha yahay dhibaatooyinkaasi ay la kulmin.
Waxyaabaha lama filaanka ee daraasadda lagu ogaaday waxaa ka mid ah qofka socodka gaaban maskaxdiisa marka la baaray iney u muuqato maskax gabowday.
Cilmibaadhayaasha caalamiga ah ee daraasaddan sameeyey waxay xiriiriyeen habnoololeedka qofka inuu xiriir toos ah uu la leeyahay caafimaadkiisa jireed iyo garaadkiisa maskaxeed (IQ), dadka yaraantooda laga billaaba ku soo noolaa nolal wanaagsan ay ka wanaagsan yihiin dadka kale.
Waxay sida oo kale khubaradu sheegeen iney cilmibaadhis ku hayaan qofka oo isticmaala cuntootiyinka kalooriga uu ku yar yahay iyo dawooyinka qaar sida ay noolasha qofka u saameyn karaan.